Igwe na-ebelata / mechie nsogbu
Igwe na-ebelata / mechie nsogbu 3 afọ 4 ọnwa gara aga #316
Nnọọ! Mgbe m belata FSX windo (ọ bụ na winded mode) na m na-achọ ihe ma na m chọrọ ịlaghachi na FSX m ga-emeghe mpio ahụ mana ihe niile ga-agbacha oji. Onweghi ihe obula ma obu ugha. Biko nyere m aka na nke a! Ọzọkwa enwere m nsogbu a naanị na ụgbọ elu ndị na-akwụ ụgwọ (PMDG 777, ukwu Aerosoft Airbus) yana simulator bụ FSX Ntuchapu. M ga-anwale itinye ụfọdụ foto.
Igwe na-ebelata / mechie nsogbu 3 afọ 4 ọnwa gara aga #317
Enwere m nsogbu a ugboro ole na ole, Onwe m. mgbe ụfọdụ Ọ bụrụ na m gbanwee echiche, nke na-enyere aka, ma ọ bụ na-echere minit ole na ole, ọ ga-ehichapụ onwe ya.
Igwe na-ebelata / mechie nsogbu 3 afọ 4 ọnwa gara aga #320
Ezi ụbọchị Janne ,,
PMDG B737NGX na-eme m FSX Acceleration GOLD na mgbe m na - eji Key AltGr site na Tinye ka nke pere mpe si na ihuenyo Sim ruo na windo, o gaghi aru oru nke oma, ihu oji dika nke gi. Ma ọ bụrụ na m na-eme otu ihe ahụ na ụgbọ elu payware,, ọ niile na-arụ ọrụ nke ọma na mpụta.
Igwe na-ebelata / mechie nsogbu 3 afọ 4 ọnwa gara aga #322
N'ezie ana m edozi nke a. Onye ọ bụla ọzọ nwere nsogbu a gaa na njikọ a: c-aviation.net/fsx-tweak /fsx-cfg-tweak-guide /
Site na nbudata "UIAutomationCore.dll" ma gbakwunye "HIGHMEMFIX = 1" na fsx.cfg. Nke ahụ nyeere m aka. I nwere ike ịchọta fsx.cfg nchekwa site na% appdata% / Microsoft /FSX
Igwe na-ebelata / mechie nsogbu 3 afọ 4 ọnwa gara aga #325
Ezigbo njikọ njikọ njikọta,,, maka FSX
Site na ihe ekwuru na njikọta saịtị ahụ, ma ọ bụrụ na ị nọ FSX STEAM ịgaghị achọ faịlụ a.
UIAutomationCore.dll - dll library file nke na - eme ka mmemme ngwa 32 rụọ ọrụ n'ime sistemụ 64. Ikwesiri ibudata ya otu ebe na isi ihe gi FSX nchekwa iji gbochie njehie OOM (n'etiti ndị ọzọ). Ọ dịghị mkpa na FSX Ntugharị Steam.
Oge ike page: 0.198 sekọnd